Shinlay: တွေ့ ရင်ပြောပေးကြပါ။
ကျမနဲ့Blog ထဲမှာသိတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦး ကြုံခဲ့ ရတာပါ။
သူက ကျမဆီကို email ပို့ လာတာနဲ့ ဒီPost ကို တင်လိုက်တာပါ။
သူ့ ကို ကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမတို့ ဝမ်းသာရမှာပါ။
MAI(Myanmar Airways Intl)
Flight No. 8M331
bag brand SIEMENS
tag No. …………….
reference No BKK8M11110
Time Mingaladon(RGN) 16:30 –Suvarnabumi Intl Arpt (BKK) 18:15
အုပ်စုလိုက်လာသောအဖွဲ့ မှ ပုဆိုးဝတ် ထားသောလူတယောက်ကျမဧ။်သေတ္တာနှင့်ချွတ်စွတ်တူသောသေတ္တာအပါအဝင် ၃ လုံးခန့် 
နေပြီ ဖြစ်ရု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥစ္စာခြောက် နေပြီဟူုရ်ုပင်ထင်ခဲ့မိတယ်ပစ္စည်းရောက်
ပစ္စည်း ၂ ခု သာ ကျန်တော့တယ်တခါမှနောက်ကျ ပြီးပစ္စည်းမယူဖူးပါ
တခါ မှPassport နဲ့ ခရီးမထွက်ဖူ့း (မြန်မာစာ.English)လုံးဝ
မရေးတတ်၊မဖတ်တတ် ပါဆိုင်းထိုးဖို့ တောင် မတတ်ပါ
PHUKET ကိုလေယာဉ်ပြောင်းစီးရန်အကူအညီ တောင်းလို့ကူညီလျှာရှည်မိ ပါတယ်
ပုဆိုးဝတ်ပြီး Bangkok ကိုလာတဲ့ဦးလေးရဲ့
ဒီစာကိုဖတ်မိတဲ့ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်ကိုကို မမ မောင်လေး ညီမလေး
Bangkok ကို ၁၉.၃.၂၀၁၀ သောကြာ ညနေ MAI Flight
နဲ့ ဈေးဝယ်ရန် ဆေးကုရန် ဘုရားဖူးရန် အကြောင်းအမျိုးအမျိုး နဲ့ 
ရောက်လာကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားထဲမှာ အသိမိတ်ဆွေ
ဆွေမျိုးမောင်နှမ များရှိပါကကူညီ မေးမြန်းပေးကြပါ လို့ 
ကျမရဲ့ ခရီးဆောင် သေတ္တာ အမျိုးအစားက (SIEMENS) ဈေးကွက်မှာ
ချရောင်းတဲ့မဟုတ်ပါ ကျမ ၇က်ပေါင်း၂၁ ၇က်ခန့် မိုင်ပေါင်း(၁၃,၂၅၀) ကျော်
လူပင်ပန်း စိတ်ဆင်းရဲ အေးသောရာသီ ပူသောရာသီ ကြောင့််
ပန်းဖျားနေတာ ၅ ရက်ရှိပါပြီ ။အိပ်ရာထဲ လှဲနေရပါတယ်
မြန်မာပြည်မှာ ၄ ည ဘဲအိပ်ခဲ့ရပါတယ်
စာ၇ွက် ၁ ၇ွက်ကြောင့် နေပြည်တော်ကိုနေ့ ချင်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်
သေတ္တာ မှားယူမိတဲ့ ပုဆိုးဝတ် ကိုကိုဦးလေးကြီးရေ
ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်ကလေး ထားပြီး အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပေးပါလို့ 
ပါသွားတဲ့ သေတ္တာထဲက ပစ္စည်းကရှင့်အတွက် ဘာမှအသုံးမ၀င်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့တစုံတယောက် သောသူအတွက် အင်မတန်မှအေ၇းကြီးပါတယ်
ဖုံးဆက်ပါတယ် “Can you book the ticket for me” မနေနိုင်၍ထပ်လျှာရှည်မိပြန်တယ်
ကျမက ဟော်လန်နိုင်ငံေ၇ာက်နေပါတယ်.
ကျေးဇူးပြုရု MAI 0816267240 U Gilmore စိုးမင်း
ခုထိတော့ No no….. တဲ့
Posted by Shinlay at 17:52
facebook မှာတွေ့လိုက်တယ်... ပြန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
ပြန်ရပါစေလို့ ကူဆုတောင်းပေးပါတယ်။ သေတ္တာတစ်ခုလုံးဆိုတော့ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ရှာမယ်နော်..၊ သနားပါတယ်။
Bkk ပြော cctv ကပုံကိုတောင်း အဲဒီပုံကို blogs မှာထည့်ပြီးရှာကြည့်ပါလား၊
Shinlay,rose of sharon,လသာည,sosegado
မမီးမီး တန်ဖိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်မလည်း တစ်ခါ မှားဘူးတယ်။ luggage Tag မှာ အမည်နဲ့ ဖုံးနံပါတ်ပါနေလို့ ပြန်လဲလို့ ရခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အရောင်တောက်တောက်တွေ (အနီ၊လိမ္မော်၊ခရမ်း) luggage တွေ သုံးမလားလို့ စိတ်ကူးနေမိတယ်။
ma mee,1)u can make the police case in BKK and they can find out very easy...2)u can requested to the MAI office to get the passenger list. They have passenger list with address and contact number as well. That i find out the way from Pilot website...good luck!!!
ပစ္စည်းမှားယူသွားတဲ့လူက အလိုက်တသိနဲ့ ပြန်ရှာဆက်သွယ်ပြီးပေးရင် ကောင်းမှာနော်။ ခုတော့ မမီးမီးစိတ်သောကများနေရပြီ။ အပေါ်က စုပြောသွားသလို MAI ကနေ Passenger List တောင်းပြီး ဆက်သွယ်ကြည့်ရင်ရော။
BKK baggage service ဖက်အ
CCTV Camera လည်းမရှိဘူးတဲ့
ကိုင်း international airportကီးရေ
သင်္ကြန် နှစ်ဦး ဆွမ်းကပ်ပွဲ ( Bad Krozingen)